mairie-antananarivo – Lions Club International
auteur 19 aprily 2017 Commentaires fermés
Notokanana ny datin’ny Alarobia 19 Aprily 2017 ny Tsangambaton’ny Lions Club International etsy Ampefiloha ; Manomboka izao koa dia hitondra ny anaran’ny Lions Club Internationale ny zaridaina eny antoerana ; Nomarihana tamin’ny fomba Ofisialy izany tamin’ny alalan’ny lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany izay natrehan’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana sy ny Fianakaviamben’ny Lions Club International notarihan’ny CMJ Fidy Rakotozafy Gouverneur du District 403 B 2.
Ny hafatra tiana nampitaina tamin’izao hetsika izao dia ny fanomezana modely sy famporisihana ny be sy ny maro handray andraikitra amin’ny fanatsarana sy fampandrosoana ny Tanànan’Antananarivo ; Ny Kaominina kosa izay tarihan’ny Ben’ny Tanàna dia misokatra amin’ny rehetra izay tsara sitrapo amin’ny fanatanterahana ny tanjona iraisana dia ny fanatsarana ny Renivohitr’i Madagasikara ho tombotsoan’ny be sy ny maro.
Marihana fa manomboka izao dia ny Lions Club International no mikarakara ny zaridaina etsy Ampefiloha ary voatokana ho an’ny olona rehetra ny zaridaina afaka hipetrapetrahina sy hakanaina. Nanome fisaorana an’ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA ny Gouverneur du District 403 B2 sy ireo mpikambana rehetra amin’ny fanotronana sy ny fanokafanan’ny tsangambato. Ny Ben’ny Tanàna dia nanome fisaorana feno amin’ny fanatsarana ny zaridaina sy ireo fiaraha-miasa rehetra miaraka amin’ny Lions.